तिमीलाई फूलहरू - केटाहरूलाई माया - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
नयाँ तिमीलाई फूल
तिमीलाई फूल औसत 3.1 /5बाहिर 9
N / A, यसमा 21.4K हेराईहरू छन्
एक तारा जसले एक शिकारीलाई माया गर्यो, र एक भाइ जसले आफ्नो भाइ गुमायो।
तीन वर्षअघि मनोरञ्जन क्षेत्रबाट अचानक गायब भएका स्टार अभिनेता युरीले पुनरागमन गरेको दिन, उनलाई एउटा रहस्यमय चिठीसँगै फूलको टोकरी दिइन्छ। पत्र पढेपछि, प्रेषकलाई समात्ने प्रयास गर्दा युरीलाई एक अपरिचित व्यक्तिले छुरा प्रहार गरेको छ। अपराधी युरीको शिकारी हो, जसले डेलिभरी म्यान भएको नाटक गरिरहेको थियो। यो रहस्यमय शिकारी को हो? युरी किन अथक रूपमा उसलाई पछ्याउँछ?
यसैबीच, युरीको नयाँ प्रबन्धक ह्युनले युरीको जीवनमा प्रवेश गरिरहन्छ... यो मानिस युरीलाई किन यति परिचित देखिन्छ?
चकित मनोरञ्जन उद्योग भित्र हुने, टुटेका मानिसहरू बीचको विकृत प्रेम कथा।
नयाँ फेला पार्नुहोस् कोरिया अश्लील वा manhwahentai.me को साथ आफ्नो साझा गर्नुहोस्, संसारमा सब भन्दा ठूलो वेबकमिक्स समुदाय।
अध्याय 43 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 42 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 36 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 35 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 34 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 33 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 32 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 31 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 30 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 29 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 28 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 27 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 26 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 25 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 24 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 23 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 22 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 21 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 20 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 19 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 18 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 17 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 16 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 15 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 14 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 13 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 12 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 11 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 10 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय9फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 8 फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय7फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय6फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय5फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय4फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय3फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय2फेब्रुअरी 15, 2022
अध्याय 1 फेब्रुअरी 15, 2022
के तपाईंले बुझ्नुहुन्न?
प्रेमको अन्धा आज्ञाकारिता
कसरी खुशी पार्ने मलाई सिकाउनुहोस्
मुटु (सकुरानो नायना)